थली जिउलाको बिशेषताः जहाँ एकै दिन रोपाई र धान काट्न सुरु गरिन्छ...! - Khaptad Nepal
१० असार २०७७, बुधबार १९:५७ June 24, 2020 Khaptad NepalLeaveaComment on थली जिउलाको बिशेषताः जहाँ एकै दिन रोपाई र धान काट्न सुरु गरिन्छ…!
मकरराज धामी, बझाङ : असार महिनामा किसानहरुलाई रोपाईको चटारोले भ्याई नभ्याई छ । कतिले रोपाई सिद्धिएका छन भने कतिपयले सुरु गर्दै छन । बझाङमै पनि कतिपय ठाँउमा रोपाई सुरु भएको छैन भने कतिपय ठाँउमा सकिन लागेको छ । तर जिल्लाको छविस पाथिभेरा गाउपालिका वडा नम्वर ६ थलि जिउलोमा भने अचम्मको चलन रहेको छ । जहाँ एकै दिन रोपाई र एकै दिन धान काट्ने काम सुरु गर्ने चलन पुस्तौ देखि चलि आएको छ । पहिला पहिला महिनावारी भएका महिला र युवतीहरुले रोप्न नपाउने चलन रहेको भए पनि अहिले भने रोप्न सुरु गरेका छन् । पुस्तौ देखिको चलन अनुसार थलि जिउलामा आज देखि रोपाई सुरु भएको छ । अन्य ठाँउमा आफुहरुको समय मिलाएर रोपाई गर्ने चलन भए पनि यस क्षेत्रमा भने एकै दिन सुरु गर्नु पर्दछ ।
थलि जिउलोमा झण्डै एक सय भन्दा बढी परिवार को बसोवास रहेको छ । यहाँ पुजारा, जप्रेल, थापा, रोकाया, बुढा, चलाउने र सिह थरका मानिसहरुको बसोबास रहेको छ । पुजाराहरुले रोपाई सुरु नगरे सम्म अन्य थरका कसैले पनि रोपाई सुरु नगर्ने चलन पुस्तौ देखि चलि आएको छ । पुजारा परिवारले रोपाई सुरु गरेकै दिन अन्य थरकाले पनि सुरु गर्ने गरिन्छ । भने सोही अनुसार धान पनि काट्ने चलन रहेको स्थानीय नरेन्द्र दौल्यालले बताए ।
उनले भने पुजारा परिवारहरुले रोपाई सुरु नगरे सम्म अन्य थरका मानिसहरुले रोपाई सुरु गर्दैनन् । रोपाई सुरु गर्नु अघि रोपाईमा जाने सवैले नुहाईधुवाई गरि शुद्ध भएर मात्रै रोपाई सुरु गर्ने चलन रहेको छ । रोपाई सुरु भएको दिन विसौना चौरमा मेला लाग्ने भए पनि विस्तारै यो चलन हराउदै गएको छ ।
पहिले पहिले थली जिउलामा एकै जातको धान लगाउने चलन भए पनि अहिले भने फरक फरक जातको धान लगाउन थालिएको स्थानिय भैरव पुजाराले बताए । धान काट्ने बेला पनि सुरुमा पुजाराहरुले धानको बाला काटी दुर्गाको मन्दीरमा चढाई दुर्गालाई खिर पकाएर चढाउने चलन पनि रहेको छ । सावीकको सैनपसेला र लेकगाउका वासीन्दा विच मैलडो तानातान हुने गर्दछ । तर युवा पिडीले चासो नदेखाए पछि विस्तारै संस्कृति हराउदै गएको उनको भनाई छ ।
२१ असार २०७७, आईतवार १९:०४ July 5, 2020 Khaptad Nepal
१५ असार २०७७, सोमबार ०९:५२ June 29, 2020 Khaptad Nepal